को बन्ला काठमाडौं विश्वविद्यालयको नयाँ उपकुलपति ? को–को छन् दौडमा ? – www.bethanchokkhabar.com
को बन्ला काठमाडौं विश्वविद्यालयको नयाँ उपकुलपति ? को–को छन् दौडमा ?
आइतबार, पौष २६, २०७७ | १९:५०:१६ |
यतिबेला काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति को बन्छ भन्ने चर्चा सुरु भएको छ । हालका उपकुलपति डा रामकण्ठ माकजुको कार्यकाल आगामी माघ ८ गते सकिँदै छ। उनी दोस्रो पटक ४ वर्षका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्त भएका थिए ।
यस पटक पनि नयाँ उपकुलपतिमा माकजु नै आउँछन् वा नयाँ अनुहारलाई उपकुलपतिको रुपमा देख्न पाइने हो भन्ने चर्चाले केयु गर्माएको छ। हालका उपकुलपतिको कार्यकाल सकिन लागेकाले सरकारले शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको संयोजकत्वमा पूर्वउपकुलपति सुरेशराज शर्मा र बोर्ड सदस्य दमननाथ ढुंगानाको सदस्य रहेको उपकुलपति सिफारिस समिति गठन भइसकेको छ ।
केयुको ३० वर्षे इतिहासमा २ जना व्यक्ति मात्र उपकुलपति भएका छन्। केयुमा ६ कार्यकाल सुरेशराज शर्मा र २ कार्यकाल डा रामकण्ठ माकजु उपकुलपति भएका छन् । तर, यस पटक उपकुलपति नदोहोर्‍याउन र डा गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौता बमोजिम योग्य व्यक्तिलाई वरिष्ठताका आधारमा मात्र नियुक्त गर्न दबाब आइरहेको छ। केयुका प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीले उपकुलपति माकजुलाई नदोहो¥याउन दबाब दिइरहेका छन् ।
यतिबेला केयुमा उपकुलपतिमा विवादित र आरोपित डा माकाजुकै निरन्तरता हुने होकी भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। यसका साथै विश्वविद्यालयका डिन डा राजेन्द्र कोजु पनि उपकुलपति बन्ने दाउमा रहेको चर्चा छ। केहीले डा कोजुको योग्यता उपकुलपति बन्ने नभइसकेकाले आफ्ना लागि नभई माकजुका लागि दौडधूप गरिरहेको अड्कल लगाएका छन्।
केयुका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘केयुको नेतृत्व केही सीमित व्यक्तिहरुले बाहिर जान नदिने दाउ गरिरहेको देखिन्छ। अब माकजुले लोभ नगरे पनि हुने हो। उहाँले अर्को योग्य व्यक्तिका लागि बाटो खाली गरिदिनुपर्छ।’ केयुका कर्मचारी र विद्यार्थी विगतका वर्षमा भष्टाचार र अनिमियतामा मुछिएको भन्दै माकजुलाई दो¥याउन नहुने बताइरहेका छन्।
केयुको उपकुलपतिका लागि मुख्य ७ जनाको नामबारे चर्चा भइरहेको छ। यस पटक माकाजु बाहेक केयुका प्राध्यापक डा जनार्दन लामिछानेको नाम पहिलो नम्बरमा छ। स्रोतका अनुसार गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षामन्त्री कायम रहेको भए यस पटक लामिछाने उपकुलपति बन्ने प्रबल सम्भावना थियो। उनी यसअघि पनि उपकुलपतिका लागि सिफारिस भएका ३ जनामध्येका एक हुन्।
दोसो नाम प्रा भोला थापाको छ। उनले माकाजुको कार्यशैलीमा काम गर्न नसक्ने भन्दै रजिष्ट्रारबाट राजिनामा दिएका थिए। उनी डिन र रजिष्टारको जिम्मेवारी निभाइसकेकोको उपकुलपतिमा उनको चर्चा बढेको हो । हालका रजिष्ट्रार शुभ शर्माको नाम पनि उपकुलपतिका लागि चर्चामा छ। उनी प्राज्ञिक र प्रशासनिक हिसाबले अनुभवी मानिन्छन्। तर उनलाई विगत २ वर्षदेखि उपकुलपति माकजुको ‘एस म्यान’को रुपमा रहेको टिप्पणी हुने गरेको छ।
त्यसबाहेक केयु बाहिरबाट पनि उपकुलपति हुने व्यक्तिको नाम चर्चामा छ। शिक्षाविद् डा मनप्रसाद वाग्लेको नाम पनि चर्चामा छ। उनले उपकुलपतिका लागि इच्छा देखाएको बताइएको छ। केयुकै म्यानेजमेन्टतिरका प्राध्यापक विजय केसीको नाम पनि चर्चामा छ। उनी म्यानेजमेन्ट तर्फका डिन थिए। एक महिनाअघि उनको कार्यकाल सकिएको हो। शिक्षातर्फका प्राडा बालचन्द्र लुइँटेलको नाम पनि उपकुलपतिका लागि चर्चामा छ।
यस्तै केयुका प्राध्यापक विभुतिरञ्जन झाको नाम पनि उपकुलपतिका लागि चर्चामा रहेको छ। केयु भित्रबाटै उपकुलपति नियुक्त गर्नुपर्नेमा धेरैको जोडबल छ। तर केहीले उपकुलपति बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने आवाज पनि उठाइरहेका छन्। केयुका प्राध्यापकहरु उपकुलपतिका लागि ओपन रहेको बताउँछन्। उपकुलपति बाहिरबाट ल्याए पनि अन्य पदाधिकारीहरु विश्वविद्यालय भित्रैबाट चयन हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।
सरकारले उपकुलपति छनोटका लागि पहिलो पटक खुला आवेदन माग गरेको छ। मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उपकुलपतिका लागि खुला आवेदन माग गरेको हो। उपकुलपति बन्नका लागि इच्छुक उम्मेदवारहरूलाई पुस २७ गतेभित्र सिफारिस समितिका अध्यक्षसमेत रहेका शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको निजी इमेलमा वैयक्तिक विवरण पठाउन भनिएको छ। तर उक्त सूचनामा इच्छुक व्यक्तिको उपकुलपति हुन पाउने आवश्यक योग्यता भने उल्लेख गरिएको छैन।
सरकारले उपकूलपति छनोटका लागि शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको संयोजकत्वमा केयुका पूर्वउपकुलपति सुरेशराज शर्मा र बोर्ड सदस्य दमननाथ ढुंगाना सदस्य रहेको उपकुलपति छनोट समिति गठन गरेको छ। उक्त सिफारिस समितिको पुस २१ गतेको बैठकले उपकुलपति छनोटका लागि खुला आवेदन माग गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसअघि उपकुलपति केयुभित्रैबाट मात्र हुने गरेको थियो। SwasthyaKhabar.com